I-D-Calcium Pantothenate yityuwa ye-calcium yevithamini B5 enyibilikiswa ngamanzi, efumaneka kuyo yonke indawo kwizityalo nakwizicubu zezilwanyana ezinempahla ye-antioxidant. IPentothenate licandelo leCoenzyme A kunye nenxalenye yesakhiwo seVitamin B. I-Vitamin B5 yinto yokukhula kwaye ibalulekile kwimisebenzi eyahlukeneyo ye-metabolic, kubandakanya imetabolism yeicarbohydrate, iiproteni, kunye neeasidi ezinamafutha. Le vithamini ikwabandakanyeka kuhlanganiso lwe-cholesterol lipids, ii-neurotransmitters, iihomoni ze-steroid, kunye nehemoglo ...
I-Ascorbyl Palmitate (ekwabizwa ngokuba yi-Vitamin C Ester) yifom ye-Vitamin C. I-Ascorbyl Palmitate yi-antioxidant esebenzayo: iyanceda ukulwa neeradicals zasimahla kunye nokunyusa i-collagen synthesis.
I-Ascorbyl palmitate yindawo efumaneka kakhulu, enyibilikayo enamafutha e-ascorbic acid (ivithamin C) kwaye inazo zonke iipropathi zomlingani wamanzi anyibilikayo, oko kukuthi ivithamin C.Iyona nto inamandla okukhusela i-lipids kwi-peroxidation kwaye iyasimahla Umqwengisi.
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate sisinyibilikisi esinyibilikayo se-Vitamin C esinokusetyenziswa kwiindawo eziphezulu ngaphandle kokuphazamiseka, i-Ascorbyl Tetraisopalmitate yenye yezona zinto zizinzileyo zeVitamin C. Ngaphandle kwezibonelelo zeVitamin C emsulwa, i-Ascorbyl Tetraisopalmiate Ukuthelekisa i-Vitamin C ye-Ascorbic Acid emsulwa, i-Ascorbyl Tetraisopalmitate ayizukukhupha okanye ukucaphukisa ulusu. Iyanyamezeleka nokuba lolona hlobo lwesikhumba lubuthathaka. Kananjalo ngokungafaniyo noVithamin C oqhelekileyo, inokusetyenziswa ngeedosi eziphezulu, kwaye ukuya kuthi ga kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo ngaphandle kokufakwa ioksijini. sisiphumo esingqinisisiweyo eklinikhi, esizinzileyo, esine-oyile esinyibilikayo se-oyile esibonelela ngokufunxa okuphezulu okuthe ngqo kunye nokuguqula ngokufanelekileyo ukuba sivelise ivithamin c kulusu. esi sithako semisebenzi emininzi sithintela umsebenzi we-intracellular tyrosinase kunye ne-melanogenesis yokuqaqamba, kunciphisa iseli ebangelwe yi-UV okanye umonakalo we-DNA, ibonelela ngokusebenza okunamandla kwe-antioxidant, kwaye inyusa ukuhlanganiswa kwe-collagen synthesis.
I-Ethyl Ascorbic Acid yeyona arhente mhlophe yokuqaqamba kolusu, inqanda umsebenzi weTyrosinase ngokusebenza kwiCu2 + kwaye ithintela ukwenziwa kwe-melanin, sisiphumo esenziwe nge-etherfic ye-ascorbic acid, yenye yezona zinto zisuselwa kwi-ascorbic acid. uzinzo olulunge kakhulu kuzo zonke iintlobo zezithambiso.
I-Ethyl Ascorbic Acid ingena esikhumbeni apho iye yadityaniswa yenziwa i-ascorbic acid, ngenxa yokuba ukusebenza kwayo kubonakala ngakumbi kunaleyo ye-ascorbic acid emsulwa, engacaphukisi ulusu namehlo.
I-Ascorbyl glucoside yinto yendalo esebenzayo enesakhiwo seVitamin C, kodwa izinzile. I-Ascorbyl glucoside inokuthintela ngokufanelekileyo ukwakheka kwe-melanin, ukungxengxeza umbala wesikhumba, ukunciphisa amabala obudala kunye nokuhamba kombala. I-Ascorbyl glucoside ikwanendima yokukhanya kwesikhumba, ulusu oluguga nokuguga, njl.
IMagnesium Ascorbyl Phosphate sisinyibilikisi esinyibilikayo emanzini, esingacaphukisi, esizinzileyo seVitamin C. Inamandla afanayo njengevithamini C yokunyusa ukuhlanganiswa kwe-collagen yolusu kodwa iyasebenza kwimilinganiselo ephantsi kakhulu, kwaye inokusetyenziselwa ukugxila njengezantsi njenge-10 % ukucinezela ukwenziwa kwe-melanin (kwizisombululo ezimhlophe zolusu). Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iMagnesuim Ascorbyl Phosphate inokuba lukhetho olungcono kuneVitamin C yabantu abanolusu olubuthathaka kunye nabo banqwenela ukunqanda naziphi na iimpembelelo ezikhutshiweyo kuba iifomula ezininzi zeVitamin C zine-asidi kakhulu (kwaye ke ngoko zivelisa iziphumo).
Isodium Ascorbyl Phosphate esuselwe kwivithamini C, ivithamin C isekwe kwisayensi nakwitekhnoloji yale mihla yokwenza izinto ezingafunekiyo ezenziwe kusetyenziswa le mveliso, nokuba kungomlomo okanye kufakwe ulusu emzimbeni, inokucolwa ngokukhawuleza yi-phosphatase ukukhulula ivithamin C, ivithamini C idlala imisebenzi eyahlukileyo yomzimba kunye ne-biochemical.Sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C inakho konke ukusebenza kwazo zombini. I-Vitamin C ikoyisa uvakalelo kukukhanya, ubushushu kunye ion zentsimbi, sh ...